पाकिस्तानमाथि भारतको ऐतिहासिक जित, रोहित र शिखरको शतक ! - Everest Dainik - News from Nepal
पाकिस्तानमाथि भारतको ऐतिहासिक जित, रोहित र शिखरको शतक !
काठमाडौं, असोज ८ । यूएईमा जारी एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर चारको खेलमा भारतले पाकिस्तानमाथि शानदार जित निकालेको छ । उसले चीरप्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानमाथि ९ विकेटको शानदार जित निकलेको हो । यो एक दिवसीय क्रिकेटमा विकेटको हिसाबले पाकिस्तानमाथि भारतको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा फराकिलो जित हो ।
याे पनि पढ्नुस दीपेन्द्रसिंह ऐरी पनि आउट
याे पनि पढ्नुस युएईमा नेपाली सामाजिक संस्थाका अध्यक्षसँग भारतीय पासपोर्ट
ट्याग्स: Asaia Cup, India Vs Pakistan, Rohit Sharma, Shikhar dhwan, UAE